Yintoni iRetetary Retrograde kwaye ichaphazela ntoni? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Yintoni iRetetary Retrograde kwaye isichaphazela njani?
Uvile malunga nokuhamba kweeplanethi, kodwa iplanethi nganye iya kubuyela emva kwinqanaba elithile. Umbuzo ngulo, ingaba yintoni le ntshukumo ingalawulekiyo kuwe?
Ukuba ukhe wangena kwilizwe lokuvumisa ngeenkwenkwezi, uya kwazi ke ukuba igama elithi retrograde lichaza ukubuyela umva kwiplanethi enegama lokuguqula izinto zijongise ezantsi. Lo mkhwa unokwenza enye yezinto ezimbini; inokwenza ukuba yonke into iwele endaweni okanye kwimeko embi, inokwenza yonke into iwe ngokupheleleyo. Ngeempembelelo zayo ezahlukileyo, kubalulekile ukwazi ukuba iplanethi nganye ikwisigaba sayo sokuphinda senziwe ngo-2021. USusan Taylor, isazi sethu seenkwenkwezi, usixelela ukuba le nto ibuchaphazela njani ubomi bakho, ikunika imihla ebalulekileyo kwaye ityhile iingcebiso zakhe ngobunzima.
Ithetha ukuthini le ngcamango?
Zeziphi iziphumo esinazo kuthi kuxhomekeke kwiplanethi?
Fumanisa yonke imihla yeli nqanaba lesiphithiphithi ngo-2021
Ukuqonda umntu we-sagittarius
Kuthetha ntoni ukuphinda ubeke kwakhona?
Olu luvo lwenzeka xa kubonakala iiplanethi ukucothisa isantya, ukumisa intshukumo yabo kunye nokubuyela umva umva ngokuchasene ne-orbit yabo yesiqhelo ipateni. Ekugqibeleni, baya kuphinda baqhubeke nekhosi yabo 'yesiqhelo' kwaye babe yinto eyaziwa ngokuba 'ngqo' kwakhona. Ngethamsanqa kuthi, oku kuya kunceda ukulungisa izinto phantsi. Iiplanethi zijikeleza iLanga, kodwa ngenxa yokuba sizigcina eMhlabeni, oku kukhokelela kwimpembelelo ebonakalayo kwaye sikhokelwa sikholelwa ekubeni iiplanethi zibuyela umva ngeli xesha. Ngelixa oku kushukuma kubonakala kufanelekile, enyanisweni, iiplanethi ziqhubeka ngokwendlela yazo yesiqhelo ngokungagungqiyo!
Kuya kusothusa ukufumanisa oko Yonke iplanethi ihamba ngeli nqanaba ngaxa lithile . Kwinkwenkwezi, iimpembelelo zeplanethi kwisigaba esineengxabano sitshintsha ngokwempembelelo yesiqhelo yenkwenkwezi. Xa lo mbono usebenza, Utshintsho olukhulu lwenzeka, kwaye iimvakalelo zakho ziya kuguquka ngakumbi kunangaphambili . Fumanisa ukuba iiplanethi zisebenza njani ngeenkwenkwezi.
Kwenzeka ntoni xa iplanethi nganye iphinda iphinde ibhalwe ngokutsha?
Cofa kwiplanethi nganye kwaye ufumanise ukuba kwenzeka ntoni xa ingena kwesi sigaba sinamatye:
> Kutheni ungafumani ukuba yeyiphi iplanethi elawula umqondiso wakho apha!<
Kwinkwenkwezi yesiko, umbono wokuphinda ubhalwe ngokutsha ubangwe kukufakwa ngaphakathi kunye nokungena ngaphakathi. Idityaniswe nenkqubo yophuhliso lokomoya kunye nokukhula ngokubonisa ngokubanzi. Le nkqubo yokomoya ikhula ngaphandle kwendalo yethu kwaye ichasene notyekelo lwethu lokuzenzekelayo. Iplanethi kulo mjikelo ibonwa 'njengendawo yamandla', oko kukuthi, sisinyanzelo kwindaleko esasizuza ilifa kwixesha elidlulileyo esiya kuthi sibumbe ukuzala okwangoku ..
IMercury Retrograde - Isiphithiphithi kukulawula ngethamsanqa
Inefuthe koku: Unxibelelwano, ukuhambisa, itekhnoloji, uhambo, ukucinga okucacileyo
Rhoqo: Amaxesha ama-3-4 ngonyaka (ahlala malunga neentsuku ezingama-21)
Xa iMercury ikulo mjikelo, Zonke iintlobo zonxibelelwano nonxibelelwano zixinekile . Kula maxesha athi Ukungaqondani kufuneka kulindelwe ngalo lonke ixesha . Uhambo luya kuziva lude kwaye ludinisa kunanini na ngaphambili, kwaye itekhnoloji esebenza ngokugqibeleleyo iya kubonakala ngathi iza kuphuka ngobusuku.
Isitshixo sokoyisa olu vavanyo kukuba thintela ukwenza naziphi na izigqibo ezinkulu . Ayikuko ukuba abantu abakungqongileyo abathembekanga, kodwa umngcipheko wokungaqondani mkhulu kakhulu ukuba ungasayina naziphi na izivumelwano okanye wenze naziphi na izivumelwano ezinzulu. Ukuba kukho nayiphi na imicimbi ebalulekileyo evelayo emva koko kubalulekile ukuba uceba kwangaphambili ukuze ufike ngexesha kwaye ubonise okona kulungileyo kuwe.
>>> Funda ngakumbi malunga nokubuyiswa kwakhona kweMercury kunye nefuthe layo.
ISaturn Retrograde -Izigqibo ezibalulekileyo zenziwa
Oko kuchaphazela le ntshukumo: Udumo, ukuma eluntwini, ulwakhiwo, umsebenzi, ezopolitiko
Rhoqo: Kanye ngonyaka (ukuhlala iinyanga ezimbalwa)
Xa uSaturn engaphandle kolawulo, yiyo unokuba notyekelo lokukhulisa ukukhula kwakho . Uya kuba nembono ecacileyo yemisebenzi kunye namalungelo akho, kwaye amaxhala akho amancinci kunye namaxhala aya kuphela nje ngeziphumo. Oko akutsho ukuba eli xesha lizo zonke izinto ezintle, nangona kunjalo kuyakubakho ukuzimisela okutsha ebomini bakho okuya kukuthintela ekuphumleni kunye nokushiya umsebenzi wakho emnyango weofisi.
Ngeli nqanaba, inokuba ngumbono olungileyo ukucinga nzulu ngawe! I-Ringed Planet icela ukubonwa, ke beka imikhwa yakho kunye nobudlelwane phantsi kwemicroscope kwaye qwalasela iinxalenye zobomi bakho onqwenela ukuzibona ziseza kubakho kwikamva .
>>> Funda malunga nokubuyiselwa kwakhona kweSaturn kunye neziphumo zayo apha.
IVenus Retrograde-Ubomi bakho bothando buchaphazelekile
Inefuthe koku: Uthando, umtshato, ubuhlakani, uthando
Rhoqo: Rhoqo iinyanga ezili-19 (iintsuku ezingama-42 ezingapheliyo)
Xa ukweli nqanaba, UVenus Unomkhwa wokubangela umonakalo kubomi bakho bothando! Ubudlelwane bunokuba neqabaka, kwaye Iingxabano zinomdla wokuvela . Lo mjikelo uyanikezela umbono ocacileyo wento oyifunayo kwezothando , enokukunyanzela nokuba uzise ubudlelwane, okanye ngokulinganayo, uziphose kuqala kwinto entsha.
Kukulo mjikelo apho uza kuthi funda lukhulu malunga nawe nendlela oziphatha ngayo iimvakalelo . Kunokubakho iingxaki zokubhabha phantsi kobuso bolwalamano lwakho, kwaye konke okudingayo yiVenus yokuphakamisa isiciko sakho funda ukuba bunjani ubomi bakho bothando . Ukwengeza, thintela ukuwela inkanuko ngokukhawuleza okukhulu nanjengoko usenokuzisola ngesigqibo osithathileyo xa sele kudlulile.
>>> Jonga kwiziphumo zeVenus retrograde.
IMars Retrograde-Izigqibo ziya kwenziwa
Imilo: Imfazwe, amandla, inkuthazo
Rhoqo: Rhoqo emva kweenyanga ezingama-25 (iintsuku ezingama-80 ezingapheliyo)
IMars ifanekisela ukuqhuba kwethu kunye nokukwazi ukwenza, ngenxa yoko akumangalisi ukuba yenza ngokuchaseneyo xa sikweli nqanaba. Unokugcwaliswa ngamabhongo kwaye unqwenela ukubona inkqubela phambili yobomi bakho, kodwa I-Red Planet iyakwala ukwenza izinto zijike - ene Iziphumo ezibi kumsindo wakho! Izicwangciso ziya kusilela ukuba yinyani, kwaye umonde wakho uya kuvavanywa ufikelele kwimida yawo.
Xa ujonga ukubuyela umva, kubalulekile ukuba wena qinisa iimvakalelo zakho . Kuya kukhathazeka ngokukhawuleza, kwaye imeko yakho yesiqhelo ezolileyo iya kulawulwa ngumsindo nomsindo. Oko kwathiwa, le mvakalelo yokubhabha iya kukunika ithuba Cinga ngeempikiswano ezingasonjululwanga ngaphakathi , kunye jongana neenxalenye zobuntu bakho ezikubambayo .
>>> Fumanisa iimpembelelo zeMars retrograde apha.
IPluto Retrograde-Ukwahlulahlula amehlo ngaphakathi kuyakhuthazwa
Oko kuchaphazela: Utshintsho, utshintsho, amandla engqondo
Rhoqo: Kanye ngonyaka (kuhlala malunga neenyanga ezintlanu)
Xa uPluto ebuyela umva, sihlala sikhona ungene nzulu kubunzulu bezazisi zethu . Kukho indlela entsha yokudideka , kwaye kusenokwenzeka ukuba uzokuzabalaza ukuze uqonde ukuba ungubani kwaye yintoni injongo yakho ebomini.
Oku kuyasinyanzela ukuba jongana nezona ndawo zethu zinzulu, ezimnyama , ezinokuthi zibe nemiphumo emibi. Kubalulekile ngexesha lala maxesha ukuba uyeke nantoni na enzima kakhulu njengoko inokuba njalo konakalisa ngokumangalisayo isimilo sakho . Mhlawumbi kungcono uzigcine uxakekile ukuze ulwe nexesha lokuchazwa.
>>> Funda malunga nokubuyiswa kwakhona kwePluto apha.
INeptune Retrograde-Uya kuyityhila iphepha elitsha
Inefuthe koku: Amaphupha, iingcinga, iingcinga
Rhoqo: Kanye ngonyaka (kuhlala malunga neenyanga ezi-5-6)
INeptune inesakhono sokuvula iingqondo zethu kunye nemiphefumlo ngexesha elifanelekileyo, kwaye oku kuyathatyathwa kwinqanaba elitsha xa liphuma. Umoya ufika ngokupheleleyo , kwaye ngelixa izisa ingqondo evulekileyo, inakho kukushiya uvulekele inkohliso nenkohliso . Ingqondo yakho yokuqiqa iya kuthatha isihlalo sangasemva, kwaye uya kushiyeka ucinga izinto ezingasokuze zibekho.
Xa iNeptune ingena kwesi sigaba, kubalulekile ukuba wena gcina ingqondo yakho emafini kwaye iinyawo zakho ziqiniswe emhlabeni . Ukuba akukho njalo, uya kuzifumanisa ungqubeka emva kwinyani Nje ukuba iphele kwaye iiglasi ezinombala ophakamileyo zimkile. Nangona kunjalo, loo nto ayithethi ukuba kuya kufuneka uyiphephe ngokupheleleyo intelekelelo, njengoko uya kuba nakho ukufunda okuninzi ngakumbi ngawe nangokubonga kwakho acace gca amaphupha akho ngeli xesha .
>>> Fumana ezantsi kwiNeptune retrograde.
IJupiter Retrograde-Ilungile okanye imbi ithamsanqa ...
Rhoqo: Kanye ngonyaka (kuhlala malunga neenyanga ezi-3-4)
Ukubuyela emva kwakhona kuJupiter yeyona nto uyifunayo ukuba kunokwenzeka uzifumanise ulahlekelwa yindlela yakho! IPlanethi yeGiant ifuna inyani nobulumko, kwaye ke ikwabonelela ithuba lokujonga umfanekiso omkhulu kwaye ubonise apho ungahambanga khona . Uyakuliqonda ukuba unethamsanqa kangakanani na ukuba ufike kule ndawo ukuyo, kwaye ukuxabisa kwakho ubomi kuya kukhula .
Ngala maxesha obudenge, isitshixo sinokufunyanwa ekuphuculeni ngokwakho! Cinga ngezinto ezonwabisayo kunye nendlela onokuthi ulwandise ngayo olu vuyo kude kube kwixesha elizayo. Yamkela ubuchule beplanethi, njengoko uza kuza kude neli xesha ukuqondwa ngokutsha kweetalente zakho , kunye iqhina lokomoya elisondeleyo phakathi kwengqondo nomphefumlo wakho .
>>> Kwenzeka ntoni ngexesha lokuphinda kubhalwe kwakhona iJupiter?
Uranus Retrograde -Ukuzola kuya kufakwa
Yintoni le ntshukumo ibangela: Isiphithiphithi, inkululeko
Rhoqo: Kanye ngonyaka (iinyanga ezi-5 ezingapheliyo)
Uranus ukubuyela umva ngu lowo uzisa ukhanyiso ! Ngelixa ezinye iiplanethi ezibuyela umva zithatha ukunyanzela utshintsho ngaphandle kwempembelelo yakho, le ikukhuthaza ukuba ubenomoya opholileyo kwaye ujonge indlela yakho. Kukho iinxalenye ezimbi zobomi bakho okhetha ukungazihoyi, kodwa u-Uranus uya kuthumela 'umzuzu wombane', kwaye Amehlo akho aya kuvuleka kwizinto ezikubambayo .
Ekuqondeni imiba yobomi bakho enesidingo sokutshintsha, kuhlala kunjalo uya kuzama ukuziguqula ngokukhawuleza . Nje ngeziphumo, ungaphulukana nokuzazi kwakho , kunye konakalisa ubudlelwane nabantu obathandayo ezingalungiselelwanga utshintsho olunje.
Tyhila iimpembelelo ze-Uranus retrograde.
Iplanethi nganye iqala nini ukuphinda ibhale ngokutsha ngo-2021?
Fumanisa imihla apha kwaye uzilungiselele okuzayo. Lumkiswa, iiplanethi ezithile zenza umdlalo weqonga kunabanye.
NgoJanuwari 30-Februwari 20 Meyi 29-Juni 21 Septemba 27-Oktobha 17
UMars akazukungena kwesi sigaba ngo-2021
Nge-20 kaJuni-ngo-Okthobha u-17
Meyi 23-Oktobha 10
Nge-25 kaJuni-ngoNovemba 30
Epreli 27-Okthobha 5
Udidi lwaMadoda akufuneki lube loMhla ngokusekwe kwiPhawu lweZodiac
Loluphi uphawu lweeMfazwe zeNkanyezi oLusekele kwimpawu yakho yeZodiac?
inombolo 555 kwibhayibhile
Isiphelo se-mercury retrograde
zingaphi iihoroscopes ezikhoyo
Ithetha ntoni i-000 kwisicatshulwa
lithetha ntoni uphawu lwelanga
iimpawu ezintsha ngeenkwenkwezi